Konveksi Seragam Kerja Surewi Ny fanamiana dia karazana fitafiana notazonin'ny mpikambana ao amin'ny fikambanana iray raha nandray anjara tamin'ny asan'ny fikambanana. Ny fanamiana maoderina dia matetika no entin'ny tafika mitam-piadiana sy ny fikambanana miadidy toy ny polisy, sampan-draharaha misahana ny vonjy taitra, ary ny mpiambina, any amin'ny toeram-piasana sy sekoly ary voafonja any am-ponja. Any amin'ny firenena sasany, ireo tompon'andraikitra hafa dia mitafy fanamiana ihany koa amin'ny adidiny; toy izany ny raharaha Corps iraisam-pirenena ataon'ny sampan-draharaham-panjakana misahana ny fahasalamana amerikana na ny prefektianina Frantsay. Ho an'ny fikambanana sasany, toy ny polisy, dia mety ho tsy ara-dalana raha tsy mambra ny fanamiana. Ny mpiasa indraindray dia manao fanamiana na fitafiana firaketana amin'ny natiora iray na iray hafa. Ny mpiasa miezaka ny manao fanamiana dia ahitana mpiasa an-tsokosoko, banky sy mpiasan'ny birao, ny filaminam-bahoaka ary ny mpikarakara ny fahasalamana, mpiasa am-perinasa manga, mpanofana manokana ao amin'ny tobim-pahasalamana, mpampianatra any amin'ny toeram-pilasiana mandritra ny lohataona, mpamonjy voina, mpanadio, , mpiasan'ny seranam-piaramanidina sy mpandraharahan'ny fialan-tsasatra, ary bar, trano fisakafoanana ary mpiasa an-trano Ny fampiasana fanamafisana ataon'ireo fikambanana ireo dia matetika ny ezaka amin'ny famokarana sy famolavolana karazana firafitry ny orinasa marobe, nefa koa misy fiantraikany manan-danja eo amin'ny mpiasa voatery hanao ny fanamiana. Ny fanamiana ny fehezan-teny dia mety hamitaka satria ny mpiara-miasa dia tsy mitafy hatrany amin'ny endrika ivelany ary mety tsy mitafy ny fitafiana nomen'ny fikambanana, na dia mbola misolo tena ny fikambanana ao anatin'ny akanjo aza. Ny asa akademika momba ny akanjo anaovan'ny Rafaeli & Pratt (1993) dia miantso ny fahamendrehana (homogeneity) ny fitafiana ho toy ny iray, ary ny fahatsapana ho faharoa. Ny mpiasa rehetra mitafy mainty, ohatra, dia mety hiseho miharihary ary misolo tena ny fikambanana na dia ny faniriany fotsiny aza dia tsy miova afa-tsy amin'ny loko ny bika aman'endriny, fa tsy amin'ny endriny. Pratt & Rafaeli, (1997) dia namaritra ny ady teo amin'ny mpiasa sy ny fitantanana momba ny akanjo fitantanana raha toa ka sahirana amin'ny dikany lalina sy ny maha-izy azy ny akanjo ambarany. Ary i Pratt & Rafaeli (2001) dia namaritra ny akanjo ho iray amin'ireo karazana marika sy asa soratra lehibe indrindra amin'ny fikambanana izay mifamatotra amin'ny fitsipi-pitenenana. Perihal Kostum Pekerja